I-VB Insight: Abahlalutyi kunye nexabiso eliphantsi, iiNgxelo zeNene-zeHlabathi | Martech Zone
I-VB Insight: Abahlalutyi kunye neXabiso, iiNgxelo zeNene-zeHlabathi
NgoLwesithathu, uDisemba 17, 2014 NgoLwesithathu, uDisemba 17, 2014 Douglas Karr
UBryant Tutterow ngumthengisi othe wakhokela amashishini amakhulu amakhulu kwizicwangciso zawo zomxholo. Unomdla ngokukodwa ekukhuthazeni umxholo, kubandakanya intengiso yemidiya yoluntu, apho iinkampani asebenze nazo zifumana iziphumo ezizodwa ngaphandle kokuba uninzi lwabahlalutyi belusitsho. Sonwabe kakhulu ukwazisa ukuba uBryant uyanceda DK New Media ngokwandisa amandla okuphucula, nawo!
Enye yeenkonzo esizinikeze uBryant kwaye siqhubeke nokubonelela abathengi bethu ngumthengisi wokufumana umcebisi. Uninzi lweenkampani azinalo ixesha nezixhobo zokukhetha isisombululo esifanelekileyo kushishino lwetekhnoloji yokuthengisa. Kwaye ukwenza utyalo-mali lwamanani amathandathu okanye asixhenxe kulwenziwo, ukudityaniswa kunye nokusetyenziswa kweqonga elingafanelekanga kunokuxabisa izigidi zeenkampani… okanye okubi kakhulu… ukubabulala ngendlala ngokusilela ukufumana amanani okufumana kunye nokugcina.
Isikhalazo sikaBryant kolu shishino kukuba abahlalutyi bahlala bechaphazeleka kwaye iingxelo zabo zibiza kakhulu ukucacisa inkcitho. Umzekelo kwimeko yengxelo yakutshanje echaziweyo IiBrand ziMosha imali kuFacebook nakuTwitter -Ingxelo eyi- $ 499 evela kwiForrester ethi icacisa zonke izicwangciso ezithi zisetyenziswe nguBryant ngempumelelo ukukhulisa ibango kunye neenzuzo kwiinkampani azisebenzelayo ukwakha ubudlelwane ekuhlaleni kwi-intanethi.
Ngoku uBryant unesisombululo kwi VB Ukuqonda!
Ukuzisa i-VB Insight
Ngobudlelwane obukhulu kunye UIan Cleary, Siqhagamshelene noStewart Rogers eVentureBeat. UStewart Rogers nguMlawuli, iTekhnoloji yeNtengiso kwiVB Insight, imveliso yeVentureBeat, enceda ukuvelisa uhlalutyo kuyo yonke imboni yemartech kunye nokusebenza nababhali abasebenzisa iqonga ukuhambisa izifundo kunye neengxelo zabo. VB Ukuqonda yingqokelela engakholelekiyo nefikelelekayo yeengxelo zeshishini lokwenyani, ezibhalwe ziingcali ezisebenzisa inethiwekhi ebanzi yeVB kuphando lokuqala.
UStewart undimemile ukuba ndibengumhlalutyi! Ndiqalisile ukuyila ingxelo yethu yokuqala yoMhlalutyi VB Ukuqonda kwimeko yeshishini lokucwangciswa kweinjini yokukhangela, ebhalelwe abaphathi bezentengiso bamashishini amashishini. Siyathemba ukuba izakugqitywa ekuqaleni kukaJanuwari!
Thenga iNgxelo yakho yokuqala ngeSaphulelo se-50%!
UStewart ukwathe kutshanje ubhale ingxelo emangalisayo ngempembelelo yemidiya yoluntu kunye nenkonzo yabathengi ngeziganeko ezothusayo kubemi babantu abakhalaza kwi-intanethi kunye nokuba iimveliso zisebenzisa njani amajelo eendaba ezentlalo ukuphucula inkonzo yabathengi ngelixa bethengisa kakuhle iimveliso zabo:
Iifolokhwe zedijithali: Ukuguqula izikhalazo zemidiya yoluntu zibe yimpumelelo yohlobo.
Martech Zone abafundi banokucofa kumfanekiso ongezantsi ukuthenga ingxelo nge-50% kwixabiso loluhlu lwayo!
[su_button url = "http://bit.ly/audpcs50 ″ target =" blank "color =" # ffffff "] Thenga iNgxelo nge-50% yeSaphulelo! [/ su_button]
tags: uhlalutyiiingxelo zomhlalutyiutitshala obukhalii-forresterkucacisiweIirogger zewartartvbukuqhuba
Uluqhuba kanjani uvavanyo lwe-A / B kwiphepha lokufika kwakho
Ngawaphi amaQonga amaNtengiso aBalaseleyo?